(Dhagayso) WAR-DAG-DAG AH: Shabaab oo la shiray Odoyaasha Garacad, Wadooyinkii magaalada xiray – Radio Daljir
Maarso 14, 2016 11:46 b 0
Garacad, 14, March, 2016 – Wararka naga soo gaaraya deegaanka garacad ee gobalka Mudug ayaa sheegaya in goor dhow oo caawa ah ay Ciidamo ka tirsan ururka Alshabaab ay la wareegeen deegaankaasi garacad. Waxaana wali jaran Isgaarsiintii deegaanka.
Ciidamadaan oo aad u badan ayaa magaalada ka soo galay dhanka xeebta waxaana ay saarnaayeen ku dhawaad shan doonyood waxaana ay sidookale ku hubaysan yihiin hubka noocyadiisa kala duwan oo casri ah sida ay noo sheegeen dadka deegaanka.
Ciidankaan ayaa markii ay soo galeen magaalada waxaa ay rideen xabado iyagoo aan la kulmin iska caabin buuran,maamulkii deegaanka iyo dadka intooda badan ayaa magaalada ka cararay waxaana ay dadka u sheegeen inay ku noolaan karaan magaalada, isgaarsiinta ayaana ah mid jaran.
Alshabaabka ayaa markii ay soo galeen Magaalada waxaa ay la shireen odayaasha deegaanka waxaana ay u sheegeen inay yihiin Alshabaab oo ay doonayaan inay Magaalada xukumaan dadkuna ay caadi ugu noolaadaan iyagoona u sheegay in dadka magaalada ka qaxay dib ugu soo laabtaan sidaas waxaa noo sheegay qof kamid ah dadka deegaanka oo aan mar ku haleelnay khadka taleefoonka.
Magaalada gudeheeda kaliyaha ku ekaan ee waxay ku bexeen oo ay xireen 3-da wado ee magaalada soo gala ee kala ah wada ka soo gashah dhanka waqooyi,wadada jariiban iyo wada kulub sida uu noo sheegay qofkaan aan la xariirnay oo aan magaciisa sheegin.
Degmada godob jiraan oo 55 KM u jirta garacad ayaa waxaa ka jirtah cabsi xoogan iyo is abaabul ay dadku samaynayaan iyagoo ka cabsi qaba Alshabaab sida uu noo sheegay gudoomiyaha Gobalka degmada godob jiraan Yuusuf Maxamed Faarax.
Gudoomiyaha degmada godob jiraan Yuusuf Maxamed Faarax oo inta aysan go,in isgaarsiinta garacad xiriir la sameeyey ayaa sheegay in dadku ay u sheegeen in dhamaan magaalada ay gacanta kugu jirto Alshabaab.